मा पकाउँदै ... | सबैका लागि उपयोगी जानकारी
कोटी: मा पकाउँदै ...
के रोटी निर्मातामा ब्रेड पकाउन सम्भव छ यो सूखी खमीरको साथ छैन, तर सामान्य खमीरको साथ? ब्याचमा कति थप्नु हुन्छ?
के रोटी रोटी बनाउनको लागि सुक्खा खमीर नभएर साधारण खमीरको साथ रोटी बनाउन सम्भव छ? ब्याचमा कति थप गर्ने? यो केवल सम्भव छैन, तर आवश्यक पनि छ। म निम्न नुस्खा प्रयोग गर्दैछु, इन्टरनेटबाट डाउनलोड।
कसरी सबै भन्दा राम्रो चिकन सूप पकाउनुहोस्
कसरी साधारण चिकन सूप पकाउने बारेमा एक घण्टा को लागी एक कुखुरा कुक। खाली फोहोर स्किम को लागी ब्रौंथ सफा गर्न। कुखुरा बाहिर निकाल्नुहोस्, बिच्छेदन गर्नुहोस् (हड्डीहरू अलग, मास छुट्टै)। मासु बारीको काट्नुहोस्। फ्राई १ ...
कसरी फ्र्याक आक्रोक र कति समय
कसरी पोलोक फ्राई गर्ने र यसमा कति समय लाग्छ, पीसको टुक्रामा काट्नुहोस्, पीठोमा रोल गर्नुहोस् र नुनको साथ स्किलेटमा फ्राई गर्नुहोस्। ठीक छ, नुन। मँ यो गर्दछु: खुलेको, टुक्रा टुक्रा। नुन, ...
कसरी टोस्टर बिना बिना?
टोस्टर बिना टोस्ट कसरी बनाउने? एउटा लेख भेटियो, जहाँ सबै कुरा वर्णन गरिएको छ कसरी कूल टोस्टहरू कसरी बनाउने :)) http://expert-byt.ru/kak-sdelat-tosty-bez-tostera/ 🙂 तपाईंलाई सफा फ्राइ pan प्यान चाहिन्छ। यसलाई आगोमा हाल्नुहोस्, यसमा रोटी राख्नुहोस् ...
कितना ग्राम प्रति कपको अनुपातमा प्रश्न?
प्रश्न यो हो कि एक कपमा कति ग्राम छन्? मलाई लाग्छ कि सबै भन्दा पछि, एक कप २०० ग्राम हो। म जहिले पनि यस "डिकोडि" "प्रयोग गर्दछु: १/200 कप 1० मिलि १/4 कप ml 60 मिलीलिटर १/२ कप ...
मलाई उबलिएको आलु को सलाद को लागि एक साधारण नुस्खा बताओ ???
मलाई उमालेको आलु सलादको एक साधारण विधि बताउनुहोस् ??? उमालेको आलु क्रश गर्नुहोस्, क्युबमा काटिएको अचारको काकडी थप्नुहोस्, तरकारीको तेलमा खन्याउनुहोस्। रोलरको साथ प्लेटमा राख्नुहोस्, मेयोनेजको साथ ब्रश गर्नुहोस् र ताजा काक्राको स्लाइसहरूसँग गार्निश गर्नुहोस् ...
नूडल्स कति पकाउन कति मिनेट "पकाउनुहुन्न" कहिलेसम्म भन्दैन? प्याकेजले भन्न सक्दैन, र त्यहाँ के छ
नूडल्स कति पकाउन कति मिनेट "पकाउनुहुन्न" कहिलेसम्म भन्दैन? यो प्याकेजमा लेखिएको छैन, र त्यो हो कि to देखि १० मिनेट सम्म, पास्ताको मोटाईमा निर्भर गर्दै ...
आलु कसरी तान्नु हुन्छ?
कसरी आलुहरु फ्राई गर्ने? धेरै सूर्यफूल तेलको साथ र कुनै पनि परिस्थितिमा ढक्कन बन्द गर्दैन। चुपचाप र चाँडै)) ताकि यो मासु जस्तो देखिन्छ, हो ... पहिले आलु फ्राई गरिन्छ, त्यसपछि माथि ...
चिसो र तातो धुलोमा के फरक छ?
चिसो र तातो धूम्रपान बीच के भिन्नता छ? तापक्रम र अवधि different विभिन्न तापक्रम सर्तहरूमा धूम्रपान गरिएको मासु उत्पादनहरू: १1820२० सी चिसो धुम्रपान; 3550С तातो धूम्रपान; 70120०१२० सी धुवाँमा पकाउँदै। पहिलो व्यक्तिहरू मुख्यतया प्रयोग गरिन्छ ...
एक ब्लेंडर मा दही मिठाई, मलाई नुस्खा बताओ
ब्लेन्डरमा कुटीज चीज डेजर्ट, मलाई रेसिपी बताउनुहोस्। म २०० हिसकें। ०.०% दूध (gr। १ )०) र कम चकलेट प्रोटीनको स्कूपको एक जोडीको साथ कम फ्याट कुटीज चीज। यो ओछ्यान अघि नास्ताको लागि एक उत्कृष्ट कम क्यालोरी प्रोटीन ककटेलमा परिणत भयो।
लोहा जंगली कास्ट गर्छ? मैले कल एक cauldron किन्, पायलफ पकायो। अब पर्खालहरूमा जंगले। के यो कास्ट आयरन cauldron को लागि यो सामान्य हो?
कास्ट फलामको खिया छ? मैले हिजो एक कढुवा किनें, पिलाफ पकाएँ अब भित्तामा रस्ट छ। के यो कास्ट फलामको कल्ड्रोनको लागि सामान्य हो? धातु तयारी टेक्नोलोजीको उल्लंघन, यदि मापन देखा पर्‍यो भने केही पनि सहयोग गर्दैन। हामीले पास गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ ...
तिनीहरू माइक्रोवेवमा स्वादिष्ट पकाएको आलु भन्नुहुन्छ। कसरी गर्ने?
तिनीहरू माइक्रोवेभ मा स्वादिष्ट पकाएको आलु भन्छन्। यो कसरी गर्ने? हामीले यो धेरै पहिले गर्नुभएन। हामीसँग ग्रिलको चुलो छ। यो कम्बी मोडमा राख्नु आवश्यक छ, अर्थात्, माइक्रोवेभहरू (सँग ...
कतिपय अण्डाहरू फोहोर
अण्डाहरू पकाउन कति समय लाग्छ ???? यदि कुच्रिएको छ भने म तिनीहरूलाई केतलीमा राख्छु र यो उमालेको बेलामा उनीहरूले सबै १० मिनेट उमालेका हुन्छन् - तपाईंलाई कडा-उमालेको छ, सायद, एक नौसिखिए स्नातक)। सामान्यतया, कडा उमालेको ...
मान्छे! चुरोटले पटियाको लागि नुस्खा को को हो? कृपया साझा गर्नुहोस्!
मान्छे! अचार पाई रेसिपी कससँग छ? कृपया साझेदारी गर्नुहोस्! उनको जीवनकालमा, मेरी हजुरआमा लेन्टको समयमा अचार काक्राका साथ पाईहरू पकाउँनुहुन्थ्यो: पातलो खमीरको पीठो राख्नुहोस् जबसम्म पीठो आउँदैन,
एक जोडी को लागि माछा खाना पकाने को लागि, एक स्टीमर छैन को लागि?
एक डबल बायलर बिना माछा स्टीम कसरी गर्ने ?? एउटा प्यान लिनुहोस्, यसमा अलिकता पानी खन्याउनुहोस्, भित्र एउटा सानो प्यान राख्नुहोस्, थोरै पानी खन्याउनुहोस् र ड्रशलागलाई एउटा सानो प्यानमा राख्नुहोस्, त्यहाँ ...
म तिमीलाई घरबाट द्रुत खाना पखेटाको लागि एक नुस्खा दिन चाहन्छु। धन्यवाद!
म तपाईंलाई घर मा द्रुत कुकिंग तेर्थका लागि एक नुस्खा सुझाव दिन सोध्छु। धन्यवाद! रेसिपी "बोहेमियन तीतर" रेसिपीका लागि तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ: - तेतर - १ पीसी। - बेकन - g० ग्राम - बटर वा फ्याट ...
कसरी राम्रो तरिकाले र स्वादिष्ट ढंग देखि ओवन मा ब्रेडक्रम्ब सुखाओ?
ओभनमा एउटा रोटीबाट कसरी राम्रोसँग र स्वादिलो ​​ड्राईफ्रेकरहरू? तेलले अभिषेक गर्नुहोस् र नुन र कालो मिर्चले छर्कनुहोस् र लसुन निचोरेर जानुहोस्, इमान्दारीताका साथ, मैले खास गरी क्र्याकरले कहिले पनि चिन्ता लिएको छैन। मैले काटे ...
कसरी माछा सफा गर्न तलको तल्लाहरू सबै भान्सामा बिछ्याउने छैन?
माछा कसरी सफा गर्ने कि तराजू सम्पूर्ण भान्सामा नछुटोस्? माछा सफा गर्न कत्ति सजिलो छ यदि तपाईं यसलाई तातो पानीमा डुबाउनु भयो वा ठोकर पानीमा सिरका साथ समात्नुभयो भने। पिन राम्रो छन् ...
एक बहुविध मा मशरूम सूप कसरी पकाउने?
ढिलो कुकरमा मशरूम सूप कसरी पकाउने? मलाई ढिलो कुकरमा मशरूम सूप पकाउन मन पर्छ रेडमन्ड एकदम स्वादिष्ट छ, म यो नुस्खा अनुसार पकाउँछु http://www.multivarka-vari.com/gotovim-v-multivarke-redmond-gribnoj-sup/ हल्का र स्वादिष्ट सूप, र यो विधि सरल छैन! ...
रुचबाट खाना पकाउने?
रोचबाट के पकाउने? रोच चिप्स सामग्रीहरू: जुनसुकै परिमाणमा, पिठो, नुनको स्वाद, तरकारीको तेल, अण्डाहरू। मेरो मनपर्ने खाना मध्ये एक। यस तरीकाले तयार गरिएको रोच खान सकिन्छ ...
56 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,790 प्रश्नहरू।